RW Itoobiya ayaa u qabtay 72 saac inay dowlada isugu soo dhiibaan xoogagga TPLF iyo… – Hagaag.com
RW Itoobiya ayaa u qabtay 72 saac inay dowlada isugu soo dhiibaan xoogagga TPLF iyo…
Ra’isal wasaaraha Itoobiya ayaa xoogagga TPLF u qabtay 72 saacadood inay dowladda isugu soo dhiibaan, xilli ay ciidamada dowladda Itoobiya ay ku sii jeedaan caasimadda Mekelle.
Abiy Axmed wuxuu hoggaanka Tigray uu u sheegay in la marayo “meel aan laga noqon karin”. Xogagga Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray ee TPLF oo gacanta ku haya dhulka buuraleyda ayaa wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan oo ayna isdhiibeyn.
Dagaalka dhowrka toddobaad dhex maraya ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya iyo kuwa daacadda u ah Tigray waxaa la rumeysan yahay inay boqollaal qof ku dhinteen kumannaanna ay ku barakaceen.
Mar sii horreysayna ciidamada dowladda Dhexe waxay ka digeen magaalada Mekelle oo ay ku nool yihiin 500,000 oo qof in taangiyo lagu hareereeyey ayna dhici karto madaafiic in lagu garaaco, “Wax naxariis ah ma jiri doonto,” ayuu yiri afhayeenka ciidamada.